Maamulka Hirshabelle oo amar ku bixiyay in la joojiyo adeegyada shirkadda Isgaarsiinta Hormuud – Balcad.com Teyteyleey
Maamul goboleedka Hirshabelle iyo Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaafkii ugu weynaa tan iyo markii maamulkaasi looga dhawaaqay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe.
Wareegto uu ku saxiixan yahay Wasiirka Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha maamulka Hirshabelle Zaki Cabdi Xaraare ayaa amar lagu siiyay hay’adaha amniga inay si dhow ula socdaan fulinta amaro horay uga soo baxay maamulkaasi.
Amarka oo ku socda shirkadda isgaarsiinta Hormuud in la joojiyo dhammaanba adeegyadii ay ka waday gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo uu maamulkaasi ka arrimiyo taasi oo horay uga dhega adeygtay shirkadda Hormuud.
Maamulka Hirshabelle ayaa dalbaday in la joojiyo adeega EVC Pulse-ka ee taleefanka lacagaha la isaga xawilo, waxayna tallaabadani ku soo beegmeysaa xilli maanta hawada laga saaray shirkadda isgaarsiinta Hormuud kaddib markii ay soo baxeen khalkhal ku yimid dhaqaalaha iyo isticmaalka shilinka Soomaaliga oo laga diiday magaalada Baladweyne.
The post Maamulka Hirshabelle oo amar ku bixiyay in la joojiyo adeegyada shirkadda Isgaarsiinta Hormuud appeared first on Ilwareed Online.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo booqday kaydadka mucaawinooyinka raashinka + Sawirro